Izinkondlo Zothando Leth isihloko ngibhale inkondlo. Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo. December 27 at Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! God guided you this far Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo?
Izinkondlo Zothando Leth isihloko ngibhale inkondlo. Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo. December 27 at Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba!
God guided you this far Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Izinkondlo Zothando Lezi nhliziyo akusizo ezethu.
Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase! Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa ukukujabulis usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila kulo Ukheth ukungishiya ngedwa ngsale ngitayiza kulo. Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!
Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini! Saturday, July 28, Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Ukuqoma akusho ukuthi usungenza umathanda kodwa kusho ukuthi kukhona isigaba sokukhula osewufikile kuso, Qhubeka nemisebenzi yakho emihle oyenzayo, Khona uzoba isibonela esihle kwasabakhula, Ngithanda mina wena nkosi omuhle, wena Wokunene. Hi everyone this is black G the poet Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba!
Zihambile izihliziyo nabanikazi Zasakhela abashadikazi Zaletha amadodana namadodakazi Mina namanje lento angikayazi Ihlala kanjani eyomunye komunye Impela labantu zzothando munye Banothando lunye Nebhayibheli liyasho wakhipha ubambo lomunye Wakha ngalo omunye Ngikholiwe namuhla Izinhliziyo zethu zingezabanye. Izinkondlo zothando: Olwami uthando Zuluring Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo?
Kodwa namhlanje uthe ngifike ngithi: Izinkondlo zothando — Inkondlo: Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!
Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Le nhliziyo akusiyo eyami Ubuhlungu kwinhliziyo ebheka umnini Linda nhliziyo yami kusasemini Zohando uyakhala uthi kanti uza nini Kade bekukhohlisa bezenza yena umnini Mhla efikayo ezolanda inhliziyo yakhe Uzothatha kwamina uqobo sengingowakhe Ngihambe naye eyongenza umkakhe Mhla inhliziyo ifika ekhaya Iyolala iphumule inethezeke Ayikho indawo enjengekhaya Umnikazi uyoyithatha lenhliziyo ayinike ikhaya Kakade ingeyakhe Noma ikimi nje Kodwa lenhliziyo Akusiyo eyami.
Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali? Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni izinkomdlo uyokubanami kubo.
Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile namanje, Usekukhumbule ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele zoghando The year has ended Ngizikhale zaze zazomela zona kimi Kubuhlungu kunzima kimi kodwa bekumele ngamukele Mhlampe ukuhamba kwakh yikho okuzokwenza ngbe nesbindi Ngime ngazi impilo ukuthi injani kulo mhlaba.
Hhayi lensumansumane esiqhelisela kude nenjabulo Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Izinkondlo zothando — Inkondlo: Izinkondlo Zothando Ezimfishane uthando olungenamkhawulo. Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo zothahdo engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Your time will come Ngathi ngyabuza kwavele kwathiwa uyabuya Solo namanje ngsabambe lelo Kuthi makunzima ngihle ngbuka esangwen kancane Iyngane zami zyambuz Email or Phone Password Forgot account?
Umhayele Izinkondlo Ezimnandi - Poem by senzokhaya umhayi
That some things are izinlondlo Impela umfundisi uzithela isisila! Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Lezi nhliziyo akusizo ezethu…. Ngenhloso yokuvuselela uthando lwethu ngakubambisa ngendandatho Ingani noJuda wamthengisa uJesu kalula kanjalo ngobucwebe beGolide neSiliva UNomvula wayekuthanda ukucula Wayevele ahlabelele ashayele phansi njalo uma sekukhona okonakele Thina sikhohlisana kakhulu sithi asisoze sihlukane Sakhohlwa ukushiya indawo yempoxeko kwakungeyona inhloso Futhi noThandolwethu lwalungenankohliso Thina bese siyizigqila zothando ngenhloso yokuthembela othandweni olungenamkhawulo Join Group settings More. Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba! Ngasala nginkemile Lenhliziyo akusiyo eyami Bheka lenhliziyo ekimi Ayilukhulumi ngisho olwami ulimi Ngibe ngisakhulume asiqondani Hlanga lwami Lendaba ithiwani Ngiloku ngibheka umnini Uye kuphela ongatolika lolulimi Lenhliziyo ayingizwa Impela akusiyo eyami.